WASHINGTON - Xubnaha kooxda la shaqaysa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa dhaleeceeyay muuqaal laga duubay dad caan ah oo ay ka mid tahay Hillary Clinton, iyaga oo akhrinaya buugga Fire and Furry ee laga qorey Trump.
Wiilka uu dhalay Trump ayaa talaabadan ku tilmaamay canjilaad, isaga oo buugga ku tilmaamay 'been lasoo dhoodhoobay.
Clinton ayaa waxa ay buugga ka akhrinaysaa tuduc dhahaya "waxa uu qabaa cabsi ah in la sumeeyo, taasna waa sababta uu wax uga cuno maqaayadda McDonalds, halkaas oo aysan ka warhaynin in uu tagayo, raashiinkana si fiican loosii diyaariyay".
Ergeyga Maraykanka u qaabilsan Qaramada Midoobay Nikki Haley ayaa fariin ay soo dhigtey boggeeda Twitter-ka waxa ay ku sheegtay in bandhigga abaalmarinada Grammy ay waligeed jecleed, balse muuqaalka lasoo bandhigay uu nuxurkii ka qaaday.
"Qaarkeen waxaan jecelnahay heesaha haddii siyaasadda laga saaro," ayay intaas ku dartay.
Madaxda Hay'adda Sirdoonka Qaranka Mareykanka oo Ruushka weeraray...